မက်ခီယာဗယ်လီ၏ မင်းသား (သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်လောင်းလျာများအတွက် မဟာဗျူဟာ ဘာသာပြန်စာအုပ် ထွက်ရှိ K (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ကျော်ထက်ထွန်း မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ မက်ခီယာဗယ်လီ၏ မင်းသား(သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်လောင်းလျာများအတွက် မဟာဗျူဟာ အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ထွက်ရှိလာပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူ မက်ခီယာဗယ်လင်ရဲ့The Princeဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ယဉ်မျိုးစာပေကနေ ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ စာအုပ်မှာ အခန်း(၂၆) ခန်းပါရှိပြီး အခန်း၁- နယ်မြေဒေသကြီး အမျိုးအစားမည်မျှ များများစားစားရှိသနည်း၊ သည်နယ်မြေ ဒေသကြီးများအား ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြင့်ရခဲ့ကြသနည်း အခန်း၂- မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေဒေသကြီးများနှင့် စပ် လျဉ်း၍…. အခန်း၃- ပူးပေါင်းနယ်မြေဒေသကြီးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍……. အခန်း၎- “ဒါးရီးယပ်စ် ဘုရင့်နိုင်ငံတော်”ကို “အ လက်ဇန္ဒား”ဘာကြောင့်အောင်နိုင်ခဲ့သနည်။ “အလက်ဇန္ဒား”နတ်ရွာစံပြီးနောက် အရိုက်အရာဆက်ခံသူများအား ဘာ ကြောင့် မပုန်ကန်ခဲ့သနည်း အခန်း၅-...
လင်းသက်ငြိမ် ● အေးစက်သောသတ္တုများ (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈ မနေ့က ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး ဒီနေ့လည်း ဘာဖြစ်ဦးမယ် မသိသေးဘူး မာလိန်မှူးမှောက်နေတော့ ရေစီးက သဘောင်္ကို သယ်ဆောင်တယ် ဦးတည်ရာမဲ့ မီးခိုးငွေ့လား ညကြီးထဲက ချောင်းဆိုးသံလား ပုလင်းတလုံး ကျကွဲသံဟာ အခန်းထဲကနေ အပြင်ကို တိုးထွက်သွား ဆိုလက်စတေး ဘယ်လိုဆုံးရမလဲ ရှူနေတဲ့လေကို ဘယ်လိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သလဲ ကိုယ်မသိပဲ အရာရာဖြစ်ပျက်နေလိုက်ကြတာ ဆံပင်လေးကိုသပ်နေရင်း ကြီးပြင်းလာတယ် ကြီးပြင်းလာရင်း ဆံပင်တွေကိုသပ်နေတယ် ပေါင်မုန့်တွေများစွာ ငါ့ကိုစားသုံးပြီးပေါ့ ဝက်ပေါင်ခြောက်တွေကော ကော်ဖီမစ်တွေကော ငါ အစားသုံးခံရင်း ရုပ်ရှင်တွေဆက်ကြည့်နေ ဖန်သားပြင်ကြီးထဲ ဘယ်သူ ငါ့ကိုထည့်သွားတာလဲ တိတ်ဆိတ်တဲ့ညဟာ မီးရထားတစင်းလို အရှိန်နဲ့ခုတ်မောင်း အမှောင်ကိုဆွဲဖွင့်နေတဲ့ အလင်းရောင်မှာ စိတ်က လူကို ဆွဲထူတယ် ပြီးရင်လည်း...
မောင်စွမ်းရည် ● ကဗျာဆရာ့အိမ် (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်မြို့မှာကဗျာဆရာ့အိမ်လို့ကျော်ကြားဖူးတာကတော့ ကဗျာဆရာတင်မိုးရဲ့ အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်းစိန်မှာရှိပါတယ်။ ရေမြောင်း (ချောင်းကလေး) ဘေးက ကမ်းပါးကို သူ့အိမ်အပေါ်ထပ်နဲ့ တံတားထိုးထားတယ်။ အိမ်ပုံစံကတော့ မြန်မာမှု လို့ ဗိသုကာဆရာရွှေက ပြောပါတယ်။ အိမ်ရှင်တွေ ဝင်မရှုပ်နဲ့ဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင် သူ့လက်သမားနဲ့သူ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပြီး ဆောက်တာပါ။ အများကတော့ မြန်မာမှုဆိုတာ ဘုံအဆင့်ဆင့်၊ အချွန်အတက်တွေနဲ့လို့ မျှော်လင့်ထားကြပေမယ့် အချွန် အတက်လုံးဝမပါ။ အိမ်ခေါင်မိုးကလည်း တခြမ်းစောင်းလို့ခေါ်ရမလားမသိ။ ရေချမ်းစင်လို ပုံစံနဲ့ပါ။ ကဗျာဆရာက မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့နယ်ကပါ။ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း ဗိသုကာဦးရွှေက မြင်းခြံခရိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း သားပါ။ ဂျပန်ပြန် ဗိသုကာတဲ့။ ဗမာပြည်မှာ ဂျပန်ပြန်ဗိသုကာဆိုလို့ ဒီတယောက်ပဲကြားဖူးတာပါ။ သူငယ်ချင်း ဦးရွှေက...
မေ လေးပတ်မြောက် အနုပညာရပ်ဝန်းသတင်းများ K (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ လူငယ်အမျိုးသမီး ဓာတ်ပုံဆရာ ၅ဦးရဲ့”Us & Beyond” အမည်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲ ပြသနေ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဆရာအဖွဲ့ “သူမ” (Thuma Collective) က ကြီးမှူးပြသတဲ့”Us & Beyond” အမည် ရတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် ၄၉ ၊ ၃ လွှာ၊ ၄၄ လမ်း (ကမ်းနားဘလောက်)ရှိ မြန်မာဒိဌပြခန်းမှာ မေလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၈ မှ ဇွန်လ ၂ ရက်ထိ ညနေ ၆ နာရီ မှ ၈ နာရီတိုင် ပြသနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံပြပွဲမှာ...
မောင်အဉ္စန ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ● ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ဘာကွာလဲ … မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စစ်တပိုင်းအစိုးရလက်ထက် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ် စဉ်ကို ၂၀၁၁ သြဂုတ်လမှာ စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မိမိတို့လိုသလိုခင်းကျင်းပြီး တက်လာခဲ့တဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအစိုးရဟာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာရဲ့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူ ပိတ် ဆို့မှုတွေကို ခံနေရဆဲအချိန်မှာ လူထုထောက်ခံမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုတို့ကနေတဆင့် ၎င်းတို့ရဲ့ တရားဝင်မှုကို ပိုမိုခိုင် မာစေအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို လက်နက်ကောင်းတခုသဖွယ် အသုံးချသွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ တစိုက်မတ်မတ်တောင်းဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို...
ေ အာင်ဝေး● ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၈ ) (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ “ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် ခုနစ်ဆယ်၊ တော်ပြီ” “ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် ခုနစ်ဆယ်၊ တော်ပြီ” “ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် ခုနစ်ဆယ်၊ တော်ပြီ” မရပ်နဲ့၊ အဲဒီ အော်သံတွေ မရပ်နဲ့။ လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးခေတ် ကုန်ပြီ။ လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးဆိုတာ အဆိပ်တွေစီးဆင်းနေတဲ့မြစ် ခေတ်ကုန်ပြီ။ ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ သစ်ပင်ပြောင်းပြန်စိုက်တာ။ ဟိုတုန်းက ဦးနေဝင်း သူပုန်မွေးပြီး အစိုးရလုပ်ခဲ့တယ်။ အခု ဘယ်သူတွေ...
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ဆင်တွေ၊ ဆိတ်တွေ၊ ပုရွက်ဆိတ်တွေ … (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ် Related posts ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ပြောင်းလည်း ပြောင်းပြောင်းပါပဲ (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ အာစိတို့ကြိုက်တဲ့ကား (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ဟိုပူရ သည်ပူရ (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ လူသားဆန်တဲ့ အမှု (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ …. (0)
မေဇွန်အေး ● သူစိမ်းတရံဆန် သစ်သီးများ (ဝတ္ထုတို) (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ သိမ့်တယောက် ငိုရဖို့ပင် ငုတ်တုတ်မေ့နေသည်။ ငိုဖို့လည်း မျက်ရည်များပင် ကျန်ပါဦးမည်လား ….။ မကြာသေးမှီက သိမ့်တယောက် အမောတကော ဆေးသွားဝယ်ခဲ့တာပဲလေ။ တရှိန်းရှိန်းဘဲ လောင်ကျွမ်းနေသည့် နေကျဲကျဲ တောက်အောက်မှာ ထီးကမပါ။ လသာနေသည့်အလား ပူမှန်းပင်မသိတော့အောင်ပဲ ဆေးဆိုင် ကြီးတဆိုင်ဆီသို့ အသော့နှင် ခဲ့ရသည်လေ။ မတ်လအလယ်၏ အပူနွေကား သိမ့်ရင်ထဲက အပူနွေကို မီနိုင်မည်မထင်။ တဆိုင်ဆီသို့် အသော့နှင်ခဲ့ ရသည်လေ။ “အသက်ကယ်ဆေး နှစ်လုံးပေးပါ” ဆရာဝန်၏ လက်ရေးသေးသေးလေးဖြင့် ရေးထားသော အင်္ဂလိပ်စာလုံးများကို သိမ့် ဖတ်မတတ်ပေ။ မြန်မာလို ပဲ မေးဝယ်ရသည်။ “ရော့…. ဒီမှာ” ဆေးနှစ်လုံးကို အိတ်ဖြင့်ထုတ်ပေးတာကိုယူပြီး...
လင်းသစ်​နီ ● တစုံတရာ ဆိပ်​ကမ်း (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ အပြုံး​တွေက အလွမ်းခုတ်​ရာ အစင်း​ကြောင်းနဲ့ ​ဈေးကြီး​ပေးဝယ်​ထားရတဲ့ လူ့ဘဝလို့ဆိုတယ်​ အနက်​​ရောင်​မျက်​နှာဖုံး​တွေ​နောက်​မှာ ​မျော​နေတဲ့ဘဝကို​တွေးမိ​တော့ ဘယ်​လိုရုပ်​​တွေများလဲ အသက်​ရှူသံ​​တွေက မျက်​နှာဖုံးကိုဆွဲဖြုတ်​လိုက်​တာနဲ့​​ ရေနစ်​​နေမလား ပြတင်း​ပေါက်​ကို ထပိတ်​မိ​တော့မယ်​ ငါးစာက မရှိဘူး ​ဂျိတ်​မှာချိတ်​မိ​နေတဲ့ မမြဲ​သောတရား​​တွေကို စိတ်​နဲ့လွှတ်​ချလိုက်​​တော့ ကျ​နော့်​ ဆိပ်​ကမ်းမှာ ငါးတကောင်​မှ ကပ်​မလာ​သေး တစုံတရာမှာ ​နေဝင်​စအချိန်​​လေး​ပေါ့ ည​နေခင်း​လေညှင်းကို မျက်​စိမှိတ်​ပြီးငြင်းခဲ့မိ​တော့ ဝတ်​ထားတဲ့ဖိနပ်​ကိုချွတ်​ချ ကိုယ့်​ပါးဟပ်​က အရသာတခုခုကို ထိုး​ကြွေးလိုက်​သလိုမျိုး ဆိပ်​ကမ်းတခုက ဒိုင်​ဘင်​ထိုးဆင်းကြည့်​လိုက်​​​တော့ ချစ်​​ခြင်း​မေတ္တာနဲ့ ဖွင့်​မှပွင့်​တဲ့​သော့တချောင်း အ​လျော်​ပြန်​​ပေးလို့ လက်​​ဆောင်​ရတယ်​ အဲ့ဒီ​နေ့ပဲ ​အိမ်​လိပ်​စာအမှား​တွေနဲ့​ သေခြင်းတရားက ငါး​လေးတကောင်​မိတယ်​ ကျ​နော်​က ပြတင်း​ပေါက်​​တွေကို ထဖွင့်​​ပေးလိုက်​တယ်​။ ။ လင်းသစ်​နီ Tags:...
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ တာဝန် (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ ငါလွှတ်ပေးတာ သူတို့မသိ … (0) ကာတွန်း OKKW ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဒီမိုကရေစီ (0)
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၇၄) (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ ● ၇၅၁ဝ စီမံကိန်းနှင့် CPB တပ်ဖွဲ့များ CPB ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ ၇၅၁ဝ စစ်ရေးစီမံကိန်းသည် အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသ၊ ၈၁၅ စစ်ဒေသ၊ တပ်မဟာ ၇၆၈ တို့အပေါ် အဓိကအခြေပြု ရေးဆွဲထားသည်။ ထိုစဉ်ကာလက CPB တပ်ဖွဲ့များ၏ အင်အားကို CPB ဗဟို၏ စာရင်းဇယားများအရ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား တပ်မဟာ ၂ ၉ဝ၁ ဦး တပ်မဟာ ၅ ၃၃ဝဝ ဦး (၆၈၃ နှင့် ၆၈၅ တပ်မဟာ ၂ ခု...
Page2of 897«12345...897»